Shiinaha caadada haweenka seddex-isku-dhafka ah ee haweenka 50% polyester 25% cudbi 25% rayonback rayonback dabacsan dhalada taam dabacsan oo leh logo in warshad bulk iyo saarayaasha | Himilada
caadooyinka haweenka seddex-geesood ah 50% polyester 25% cudbi 25% rayonback racerback dabacsan dhalada taam dabacsan oo leh logo in bulk
Taangiyadaan Tri-Blend Racerback ee haweenkani waxay garaacaan dhammaan isbeddellada saxda ah: isku-darka 'tri-blend', 'racerback', iyo iswaafaqda qulqulka leh. Ultra-lightweight, taangigan casriga ah ee horay loo sii wado ayaa ah xulashada ugu habboon ee dhacdadaada soo socota ee kooxdaada.
1.Taankan 'Tri-Blendal Racerback Tank' ee haweenkani wuxuu ku dhuftaa dhammaan isbeddellada saxda ah: isku-darka 'tri-blend', 'racerback', iyo ku habboonaanta qulqulka leh. Ultra-lightweight, taangigan casriga ah ee horay loo sii wado ayaa ah xulashada ugu habboon ee dhacdadaada soo socota ee kooxdaada.
Taangiyadaan tartameyaasha khaaska ahi waa astaanta raaxada aan dadaal lahayn. Waxyaabaha dhuuban ee khafiifka ah ayaa kaliya qaro weyn oo aadan u baahnayn inaad ku xidho cami iyaga, laakiin way lakulmi karaan haddii ay kaa dhigayso mid aad ku raaxaysato. Sababtoo ah shaatigani wuxuu ku saabsan yahay adiga oo raaxo leh.
Hore: waxqabadka rajabeeto
Xiga: Oem daabacaadda cad ayaa maydhay super jilicsan wareega qoorta caato ah ee ku habboon dumarka seddex-isku-dhafan ee aasaasiga ah
faashad suuf ah oo milan
shaati caag ah
logo caadadii caado dhogor casaan garabka cro ...
caadada marathon neefsashada jumlada ...